Komishanka Maamul-wanaagga Somaliland oo Farta ku Fiiqay Hay’adaha Musuqmaasuqa ugu Badani ka Dhaco |
Komishanka Maamul-wanaagga Somaliland oo Farta ku Fiiqay Hay’adaha Musuqmaasuqa ugu Badani ka Dhaco
Hargeisa(GNN):- Komishanka Maamul-wanaagga iyo La-dagaallanka Musuqmaasuqa Somaliland, ayaa farta ku fiiqay meelaha ugu daran hay’adaha dawladda ee uu ka dhaco musuqmaasuqa ugu badan ee laga sameeyo dalka.
Komishanku waxa uu caddeeyey in musuqa ugu badani uu ka dhaco meelaha ay ka mid yihiin bixinta Qandaraasyada dawladda, goobaha cashuuraha, xarumaha dakhili ururinta iyo hay’adaha Garsoorka, kuwaas oo loo baahan yahay si dhab ah wax looga qabto oo aan wax dulqaad ah loo yeelan.
Sidaasna waxa lagu sheegay Warsaxaafadeed Komishanka Maamul-wanaagga iyo La-dagaallanka Musuqmaasuqu ku soo beegay xuska maalinta caalamiga ah ee La-dagaallanka Musuqa Adduunka ee 9-ka bisha December oo sannad walba la xuso.
War-murtiyeedkaasi oo uu ku saxeexnaa Guddoomiyaha Komishanka Maamul-wanaagga Md. Axmed Muxumed Madar, waxa lagu yidhi, “Maanta (Jimcihii) oo ay taariikhdu tahay 9ka December, 2016, oo ku beegan maalinta caalamiga ah ee la-dagaalanka aafada Musuqmaasuqa, Waxa uu komishanka Maamul-wanaaga iyo La-dagaalanka Musuqumaasuqa hal-ku-dheg uga dhigay “aan takoorno isbahaysiga Musuqa”.
Komishanka Maamul-wanaaga waxa uu ku wargalinayaa dhammaan hay’adaha xukuumadda iyo bulsha-weynta Somaliland inay takooraan isbahaysiga musuqa si loo helo maamul-toosan iyo bulsho u heegan la-dagaalanka musuqa iyo wax-isdabamarinta loona gaadho heer aan loo dul-qaadan karin musuqa (Zero Tolerance of Corruption).
Sida lagu ogaaday daraasad uu komishanka Maamul-wanaagu sameeyey goobaha u nugul in musuqmaasuq ka dhaco waxa ka mid ah:- Nidaamka bixinta Qandaraasyada Qaranka, Maamulka Cashuuraha, Goobaha Dakhli ururinta, Garsoorka iyo Caddaaladda, Saacadaha shaqada, iyo ku-tagrifalka awoodda dawladeed.
Sidaa darteed, musuqmaasuqu waa aafada ugu weyn ee waxyeelaysa dhaqaalaha, shuruucda, dawladnimada, isla markaana horseeda caddaalad-darro, faqri iyo Maamul-xumo baahsan oo wada saamaysa dhammaan hay’adaha dawladda.”
Waxa kaloo ay soo bandhigeen waxyaabaha u qabsoomay muddada ay xilka hayeen, waxaanna warsaxaafadeedka lagu yidhi;
a) Waxyaabaha u Qabsoomay Komishanka
Komishanku waxa uu dib-u-eegis ku sameeyey hannaanka Maamul ee wasaaradaha, Waxbarashada, Qorshaynta, Caafimaadka, iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ah wasaaradaha ugu waaweyn dalka.
Komishanku waxa kale oo dib-u-habayn ku sameeyey Dawladda hoose ee Wajaale oo ay ka jirtay dhibaato dhinaca maamulka ah,
Komishanku waxa uu hirgaliyey Daraasaddii ugu horaysay ee laga sameeyo la-dagaalanka Musuqa (National Corruption Perception Survey).
Qiimayn iyo darsid ku sameeyey ilaalinta saacadaha shaqada qaranka,
Komishanku waxa uu baadhis ku sameeyey qaarka mid ah wasaaradaha dawladda,
Waxa uu fuliyey kormeer, qiimayn iyo xog-waraysi uu la yeeshay dhammaan wasaaradaha dawladda, iyadoo uu sannadka 2017 uu xog-waraysi dhinaca shaqada ah la yeelan doono dhammaan hay’adaha Madaxbannaan ee qaranka (government Agencies).
Si loo dardar galiyo la-dagaalanka musuqa, komishanka waxa u qorshaysan inuu hirgaliyo hawlaha hoos ku qoran:-
In xukuumada iyo Goleyaasha Qaranka laga helo rabbitaan dhab ah oo ku aadan la-dagaalanka Musuqa.
In dib-u-eegis lagu sameeyo xeerka Komishanka Maamul-wanaaga iyo la-dagaalanka musuqa isagoo la kaashan doona Xukuumadda iyo Goleyaasha sharci-dejinta.
Diwaangalinta Hantida Masuuliyiinta ay xukuumaddu u magacaabayso xilalka si looga hortago in masuulka la magacaabay aanu si sharciga baalmarsan uga faa’iidaysan xilka loogu igmaday inuu bulshada ugu adeego.
Samaynta daraasad ku saabsan fikirka bulshadu ka qabto arrimaha maamul-wanaaga (National Good Governance Perception Survey).
In dib-u-habayn lagu sameeyo Hannaanka Maamulka Dawladda dhexe iyo dawladaha hoose ee dalka, lana hirgaliyo kuwii hore loogu sameeyey (functional Review).
In komishanku hirgaliyo barnaamuj ballaadhan oo wacyigalineed oo ku saabsan la dagaalanka musuqa, kuna salaysan ku-dhaqanka caqiidada islaamka.
In la kormeero hab-sami-u-socodka maamulka hay’adaha qaranka, isla markaana baadhista iyo dabagal lagu sameeyo galdaloolooyinka maamul ee jira (dhammaan Dhaqamada Musuqa).
In komishanku hubiyo hirgelinta qorshe-hawleedyadda Hay’adaha Dawladda
In komishanku ka shaqeeyo xoojinta wada-shaqaynta hay’adaha dabagalka (Supreme Audit Institutions).
In la dhiirigaliyo, lana kobciyo ururada bulshada ee ka qaybqaata la-dagaalanka Musuqa.
Nidaamka Gurmadka Abaaraha.
Gurmadka loo samaynayo dadka ku tabaalaysan abaaraha waxa ka jira isku-xidhnaan la’aan gaar ahaan hawlaha ay fulinayaan wasaaradaha ama hay’adaha ay khusayso, iyadoo masuul waliba uu gaar kiisa uga qayb-qaadanayo gurmadka abaaraha.
Sidaa darteed, Komishanku isagoo ka eegaya dhanka maamul-wanaaga, wuxuu ku talinayaa in dhammaan hay’adaha dawladda ee sida gooni goonida ah u wada gurmadka abaaraha ay la midoobaan Guddida Abaaraha ee Heer qaran si loo mideeyo hawl-galada Sabata bixinta dadka ay abaaruhu aafeeyeen.
Komishanka Maamul Wanaaga iyo La-dagaalanka Musuqmaasuqu, waxa uu ka codsanayaa xukuumadda, Goleyaasha Qaranka Muwaadiniinta, Ururada bulshada iyo hay’adaha Caalamiga ah ee ka hawlgala Somaliland inay iska kaashadaan sidii loo takoori la’haa isbahaysiga musuqmaasuqa.
Taas oo inoo horseedi karta in la helo bulshado wacyigashan la xisaabtami karta Masuuliyiinta loo igmaday socod siinta hawlaha qaranka iyo ku dhaqanka xeerarka khuseeya maamul-wanaaga iyo ladagaalanka Musuqmaasuqa ee dalka (JSL).”